Baiboly pejy 32 - Ny Baiboly
Voalohany < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Manaraka Farany
Eksaody toko 1 (tohiny)
19Fa hoy ny navalin'ny mpampivelona tamin'i Faraona: Tsy mba tahaka ny Ejipsiana anie ny vehivavy Hebrio: matanjaka izy, ka mbola tsy tonga akory ny mpampivelona dia teraka izy.
20Koa ny mpampivelona nasian'Andriamanitra soa, ary ny vahoaka nihamaro sy nihanahery fatratra. 21Nambinin'Andriamanitra ny fianakavian'ny mpampivelona noho ny fahatahorany an'Andriamanitra.
22Ary Faraona nandidy ny vahoaka rehetra, nanao hoe: Atsipazo any anaty ony ny zazalahy teraka rehetra fa ny zazavavy avelao ho velona.
Eksaody toko 2
11Tamin'izany andro izany efa lehibe Moizy, ka nivoaka nankany amin'ny rahalahiny; nahita ny asa mafy nataony izy, ary nisy Ejipsiana anankiray hitany nikapoka Hebrio anankiray tamin'ireo rahalahiny. 12Niherikerika nijery izy aloha, ka nony fantany fa tsy nisy olona teny, dia novonoiny ilay Ejipsiana ka nafeniny tao anaty fasika. 13Ny ampitson'izay indray, nivoaka izy, ka indry fa nifanditra ny Hebrio roa lahy, ary hoy izy tamin'ilay diso hoe: Ahoana no ikapohanao ny namanao? 14Fa hoy ny navalin-dralehilahy: Iza no nanangana an'ialahy ho lehibenay sy mpitsara anay? Sa tadiavin'ialahy hovonoina koa aho, tahaka ny namonoan'ialahy ilay Ejipsiana? Raiki-tahotra Moizy, ka hoy izy: Misy mahalala tokoa ilay zavatra. 15Nony ren'i Faraona ny zavatra nitranga dia notadiaviny hovonoina Moizy, saingy nandositra ny tànan'i Faraona izy, ka nankany amin'ny tany Madiana, dia nipetraka teo anilan'ny lavaka fantsakana.
16Nanan-janaka fito mirahavavy ny mpisorona tao Madiana; ary tonga nanovo rano izy ireo, dia nameno ny tavy hampisotroany ny biby fiompin-drainy. 17Kanjo tonga ny lehilahy mpiandry ondry ka nandroaka azy ireo. Fa nitsangana kosa Moizy niaro azy sy nampisotro rano ny biby fiompiny. 18Nony tafaverina tany amin-dRagoela rainy izy ireo, dia hoy izy: Nahoana no nalaky tafaverina hianareo androany? 19Ka hoy ny navaliny: Nisy Ejipsiana anankiray niaro anay tamin'ny tànan'ny mpiandry ondry, sy nanovo rano ho anay aza sady nampisotro ny biby fiompy. 20Dia hoy izy tamin'ireo zanany vavy: Aiza izy izany: Nahoana no navelanareo any izany lehilahy izany? Antsoy izy hihinan-kanina. 21Ary nanaiky hitoetra tao amin-dralehilahy Moizy ka nomen'io ho vadiny Seforà zanany vavy. 22Tera-dahy Seforà ka nataon'i Moizy hoe Gersama ny anarany, fa hoy izy: Vahiny aty an-tany hafa aho.
23Maty tanatin'izany andro maro izany ilay mpanjakan'i Ejipta. Ny zanak'Israely mbola niferinaina tamin'ny fanandevozana, ka velon-taraina mafy, ka tafasondrotra hatrany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanandevozana. 24Koa nohenoin'Andriamanitra ny fitarainany; tsaroany ny fanekeny tamin'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba. 25Nijery ny zanak'Israely Andriamanitra ka nahafantatra azy.
Eksaody toko 3
Ny niantsoan'Andriamanitra an'i Moizy.
1Ary Moizy niandry ny biby fiompin'i Jetrao, rafozany, mpisorona tao Madiana. Nentiny nankany ankoatry ny efitra ny biby, ka tonga tany amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra, tany Horeba, izy. 2Ny anjelin'ny Tompo niseho taminy, amin'ny endriky ny lelafo, teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo. Hitan'i Moizy fa indro nirehitra avokoa ilay zava-maniry milobolobo, nefa tsy levona ilay zava-maniry milobolobo. 3Ka hoy Moizy: Ndeha hiolaka aho handinika io fahitana lehibe io, sy hizaha izay tsy mahalevona ny zava-maniry milobolobo. 4Hitan'ny Tompo fa niolaka hijery izy; dia niantso azy Andriamanitra teo afovoan'ny zava-maniry milobolobo, nanao hoe: Ry Moizy! ry Moizy! Ka hoy ny navaliny: Inty aho. 5Dia hoy Andriamanitra: Aza manakaiky eto: esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa tany masina io. 6Ary hoy koa izy: Izaho no Andriamanitry ny rainao, Andriamanitr'i Abrahama, Andriamanitr'Isaaka ary Andriamanitr'i Jakoba. Nosaronan'i Moizy ny tavany fa natahotra ny hijery an'Andriamanitra izy. 7Ary hoy Iaveh hoe: Efa hitako ny fahorian'ny vahoakako izay any Ejipta ary henoko ny fitarainany noho ny afitsok'ireo mpamoritra azy: fa fantatro ny fijaliany. 8Ka hidina aho hamonjy azy amin'ny tànan'ny Ejipsiana, hitondra azy miakatra avy amin'ity tany ity, ho any amin'ny tany mahavokatra sy malalaka, tany tondra-dronono aman-tantely, dia any amin'ny tany onenan'ny Kananeana, ny Heteana, ny Amoreana, ny Ferezeana, ny Heveana ary ny Jeboseana. 9Ary ankehitriny dia indro fa tafasondrotra hatraty amiko ny fitarainan'ny zanak'Israely, ary efa hitako ny fahoriana atambesatry ny Ejipsiana amin'izy ireo. 10Koa handeha hianao amin'izao, irahiko ho any amin'i Faraona, hitondranao mivoaka ny zanak'Israely vahoakako.
11Fa hoy Moizy tamin'Andriamanitra : Zinona moa aho no hankany amin'i Faraona sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ejipta? 12Dia hoy Andriamanitra: Homba anao aho; ary izao no famantarana fa izaho no naniraka anao: Rahefa tafavoakanao an'i Ejipta ny vahoaka, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity hianareo. 13Ary hoy Moizy tamin'Andriamanitra: Izao àry, dia ho any amin'ny zanak'Israely aho, ka hilaza aminy hoe: irahin'ny Andriamanitry ny razanareo aho ho aty aminareo. Raha manontany izay anarany izy, dia ahoana no havaliko azy ireo? 14Hoy Andriamanitra tamin'i Moizy: Izaho no Ilay misy. Izany, hoy izy, no havalinao ny zanak'Israely: Ilay misy no maniraka ahy ho aty aminareo. 15Dia hoy koa Andriamanitra tamin'i Moizy: Lazao amin'ny zanak'Israely hoe: Iaveh, Andriamanitry ny razanareo, dia ny Andriamanitr'i Abrahama, Andriamanitr'Isaaka, Andriamanitr'i Jakoba, no maniraka ahy ho aty aminareo. Fa izany no anarako mandrakizay; izany no hahatsiarovana ahy hatramin'ny taranaka fara mandimby. 16Mandehana, vorio ny loholon'Israely, ka lazao aminy hoe: Niseho tamiko Iaveh, Andriamanitry ny razanareo, dia ny Andriamanitr'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba, nanao hoe: Namangy anareo aho, ary nahita ny anaovan'ny olona anareo any Ejipta. 17Ka hoy aho: Hoentiko hianareo hiakatra avy any Ejipta, izay hamoretana anareo, ho any amin'ny tanin'ny Kananeana, ny Heteana, ny Amoreana, ny Ferezeana, ny Heveana ary ny Jeboseana, any amin'ny tany tondra-dronono aman-tantely. 18Fa hihaino ny teninao izy ireo; dia handeha hianao sy ny loholon'Israely ho any amin'ny mpanjakan'i Ejipta, ka hanao aminy hoe: Niseho taminay Iaveh ilay Andriamanitry ny Hebrio. Koa amin'izao avelao izahay handeha lalan-kateloana any an'efitra, hanolotra sorona amin'ny Tompo, Andriamanitray. 19Fantatro ihany fa tsy hamela anareo handeha ny mpanjakan'i Ejipta, raha tsy amin'ny tànana mahery; 20nefa haninjitra ny tànako aho hamely an'i Ejipta, amin'ny fahagagana isan-karazany hataoko eo aminy, ka havelany handeha hianareo rahefa afaka izany. 21Hataoko mahita fitia eo imason'ny Ejipsiana ity vahoaka ity, any ka tsy hitondra tanam-polo hianareo, rahefa handeha.
Pejy: Voalohany < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2319 seconds